Salvia Chamaedryoides: Germander Sage ကြီးထွားလာပုံ - ပန်းပွင့်
Salvia Chamaedryoides: Germander Sage ကြီးထွားလာပုံ
အားလုံး Germander Sage အကြောင်း
စာရေးသူ Ann McCarron အကြောင်း
Germander sage၊ မက္ကဆီကန်အပြာရောင်ပညာရှိသို့မဟုတ်အပြာရောင်ပိတ်ပင်ပညာရှိဟုလူသိများသော Salvia chamaedryoides သည်မည်သည့်ဥယျာဉ်မှူးကိုမဆိုစွဲမက်စေနိုင်သည့်အတက်ကြွဆုံး၊ အပြာပန်းပွင့်များနှင့်အတူစွယ်စုံသုတ်ဆေးဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မက္ကဆီကိုရှိ Sierra Madre တောင်တန်းရှိပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၇၀၀၀ ပေ Chihuahuan သဲကန္တာရဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အစွန်းရောက်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ဤနှစ်ရှည်ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥယျာဉ်များတွင်မည်သို့ကြီးပွားနိုင်မည်နည်း။ ယင်း၏ခြောက်သွေ့သောဇစ်မြစ်များကြောင့်ပယ်ရှားမနေပါနှင့်!
Salvia chamaedryoides သည်ဥရောပနှင့်မြောက်အမေရိကနှင့်အထူးသဖြင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိအိမ်များကိုရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကြီးထွားရန်လွယ်ကူပြီးသင့်ဥယျာဉ်သို့လိပ်ပြာများ၊ ပျားများ၊ မကြိုက်တာကဘာလဲ?
ကြီးထွားရန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များ Salvia Chamaedryoides:
ဥယျာဉ်ကို Safe Snail & Slug Bait
Bontone II အမြစ်အမှုန့်
Salvia chamaedryoides သည်အလွန်ကောင်းသောလိပ်ပြာနှင့်ပျားဆွဲဆောင်သည်။
လူအသုံးအများဆုံးအမည် ဂျာမန်ပညာရှင်၊ မက္ကဆီကန်အပြာရောင်ပညာရှိ၊
သိပ္ပံနည်းကျအမည် Salvia chamaedryoides
အမြင့် & ပျံ့နှံ့ 3-4ft အကျယ်, အရပ်ရှည်ရှည် 12-18in
အလင်း နေရောင်အပြည့်၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရိပ်
မြေဆီလွှာ ကောင်းစွာညှစ် chalky, သဲ, loam
ရေ ရေလိုအပ်မှုနည်း၊ မိုးခေါင်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
ပိုးမွှားများနှင့်ရောဂါများ Aphids, ပင့်ကူသွင်း, ပတ်ကျိ, ခရု, အမှုန့်များအနာ
Germander sage သည်အစားအစာဥယျာဉ်တစ်ခုအတွက်ချစ်စရာကောင်းသောနယ်စပ်စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Germander Sage အတွက်ရုက္ခဗေဒနာမကိုအမှီ Salvia chamaedryoides ။ လျှာတစ်လှည့်စီနည်းနည်းချင်းစီ၊ SAL-vee-uh၊ ကမ် -Ye-dry-OY-deez ကမာရွတ် ဂရိစကားလုံးမှလာသည် ချင်းမိုင် ဆိုလိုသည်မှာဤချုံပင်၏ကြီးထွားမှုအလေ့အထကိုထင်ဟပ်စေသော 'ထောင်ခြင်း' သို့မဟုတ် 'မြေပြင်ပေါ်တွင်' ဖြစ်သည်။
Salvia သည်ပူစီနံမိသားစု Lamiaceae တွင်နှစ်စဉ်နှစ်ရှည်နှင့်နှစ်ရှည်ပင်အမျိုးမျိုး၊ သစ်သားဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အဆင်တန်ဆာချုံဖုတ်များသို့မဟုတ်ချုံဖုတ်ခွဲခြားသည့်မျိုးစိတ်ပေါင်း ၁၀၀၀ နီးပါးရှိသည်။ Salvia chamaedryoides သည်မျိုးရိုးဗီဇအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းစိမ်းလန်းသောသစ်သားချုံပုတ်သို့မဟုတ်မြေပြင်အဖုံးဖြစ်ပြီးအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးငွေရောင်မီးခိုးရောင်၊ အစိမ်းရောင်မွှေးကြိုင်သောသစ်ရွက်နှင့်အရှည်တစ်လက်မခန့်ရှိသည်။
အရွက်များနှင့်ပင်စည်နှစ်ခုစလုံးသည်ငွေရောင်အောက်ခံသွင်ပြင်နှင့်မရေရာသောဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ နှုတ်ခမ်းကျယ်သောနှုတ်ခမ်းကျယ်သောအပြာအပြာပန်းပွင့်များသည်နွေရာသီအစောပိုင်းမှသည်ပူပြင်းသည့်ရာသီဥတုနှင့်နွေရာသီနှောင်းပိုင်းမှအစောပိုင်းရာသီဥတုပိုသောဆောင်းရာသီအထိနွေရာသီအစောပိုင်းအထိပန်းပွင့်သည်။ ၎င်းသည်အလျား ၁၂ မှ ၁၈ လက်မနှင့်အနံ ၃ မှ ၄ ပေကျယ်သောကျစ်လစ်သောနိမ့်ကျသောအပင်များတွင်ကြီးထွားလာပြီးကျယ်ပြန့်သောအမြစ်များမှထွက်သွားသည်။
မက္ကဆီကိုမှ အစပြု၍ ၁၈၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဥရောပသို့စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအတ္တလန္တိတ်ကိုဖြတ်ပြီးမြောက်အမေရိကသို့ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ရှာဖွေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မိုးခေါင်မှုဒဏ်ခံနိုင်သောလူကြိုက်များသည် xeriscape ဥယျာဉ် ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာစေသောအပြာရောင်ပန်းများသည်မတူညီသောခြောက်သွေ့သောရှုခင်းများကိုအရောင်တောက်ပစေသည်။ ပန်းပွင့်အရောင်သည်လူသိများသောသံလိုက်ဖြစ်ပြီးမွေးမြူသည့်ပိုးမွှားများအထူးသဖြင့်လိပ်ပြာများနှင့်ငှက်မင်များ။
နေရာလွတ်လိုပါသလား ဒီစက်ရုံအိုးထဲမှာကောင်းစွာကြီးထွားလာသည်။ သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေကိုကောင်းကောင်းညှစ်။ မြေဆီလွှာနှင့်နေကိုအပြည့်အဝပြန်လည်ပွားအောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အနည်းဆုံး ၃ ဂါလံ (၁၀-၂၀ လီတာ) အိုးကြီးသည်စက်ရုံ၏သဘာဝပြန့်ပွားနေသည့်အလေ့အထမှအများဆုံးရရှိရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Terracotta အိုးများသည်သစ်ရွက်များနှင့်ပန်းများ၏ထူးခြားသောအရောင်ကိုအထူးသဖြင့်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
Salvia chamaedryoides သည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ကြီးမားစွာဖုံးအုပ်ထားသော်လည်းပျံ့နှံ့သော်လည်း၎င်း၏ကြီးထွားမှုမှာထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အိုးများနည်းတူတည်နေရာနှင့်မြေဆီလွှာသည်အဓိကသော့ချက် ဖြစ်၍ နေပူထဲတွင်ကောင်းစွာညှစ်ထားသောမြေတွင်ကြီးထွားခြင်းနှင့်နွေကာလတစ်လျှောက်လုံးပန်းပွင့်များစွာကိုသင်ရရှိမည်။
တစ် ဦး hass ထောပတ်သီးသစ်ပင်ကြီးထွားဖို့ဘယ်လို
သင်၏အိမ်ကမ်းခြေသည်သို့မဟုတ်ကယ်လီဖိုးနီးယားကဲ့သို့ပူပြင်း။ ခြောက်သွေ့သောနေရာ၌နေထိုင်ပါကဤတွင်ကောင်းမွန်သောဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငွေရောင်မီးခိုးရောင် / အစိမ်းရောင်သစ်ရွက်များဖြင့်ဥယျာဉ်ပင်များကိုရှာဖွေပါ။ ၎င်းအပင်များသည်မကြာခဏမိုးခေါင်ခြင်းနှင့်ဆားဒဏ်ခံနိုင်သောအရွယ်အစားရှိပြီးအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးကောင်းမွန်သောကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်ဗြိတိသျှကမ်းရိုးတန်းဥယျာဉ်ခြံမြေအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောမြေနိမ့်အဖုံးများကဲ့သို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဂျာဂျာပညာရှိပန်းပွင့်များ၏ closeup အမြင်။
Salvia chamaedryoides ကြီးထွားလာသောအခါအပင်သည်အဘယ်မှလာသည်၊ ၎င်း၏မက္ကဆီကိုရှိအမြင့်ပိုင်းသဲကန္တာရကိုစဉ်းစားပါ။ သင်အခြေအနေများမှန်ကန်သောရပြီးတာနဲ့ , လိုအပ်သောအခါရေအနည်းငယ်နှင့်ဆံပင်ညှပ်ထည့်ပါ။
ဤစက်ရုံသည်နာရီပေါင်းများစွာကြာသောနေရောင်ခြည်ကိုခံယူသင့်သော်လည်းအလင်းအရိပ်အချို့ကိုသည်းခံနိုင်သည်။ Salvia chamaedryoides သည် USDA မာကျောသောဇုန် ၈ နှင့် ၇ (၅ မှ ၁၅ ºF, -9 to -12ºC) အထိအခြေအနေဆိုးရွားနိုင်သည်။ ဇုန် ၉၊ ၁၀ ကဲ့သို့သော USDA ပိုမိုခိုင်မာသည့်အပူပိုင်းဒေသတွင်အပင်သည်အမြဲတမ်းစိမ်းလန်းစိုပြေပြီးဆောင်းရာသီတွင်အရွက်အချို့ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပြင်းထန်သောနှင်းခဲများနှင့်နွေ ဦး ရာသီတွင်အမြစ်များမှပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်မြေပေါ်သို့ပြန်ရောက်သွားသည်ဟုသိထားကြသော်လည်းဤအရာသည်အာမခံချက်မရှိပါ။
ဥရောပမြောက်ပိုင်းတွင် Salvia chamaedryoides ကိုရွက်ကြွေများအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး USDA ဇုန် ၈ နှင့် Royal Horticultural Society (RHS) နှင့်ညီမျှသော H4 ကိုခဲယဉ်းသည်။ အေးသောစိုစွတ်သောနေရာများတွင်အပင်များသည်ဆောင်းတွင်းသိုးမွေးကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည် (သို့) အိုးထဲတွင်ရှိလျှင်အိမ်ထဲသို့ယူဆောင်လာရမည်။
၎င်း၏သဘာဝကျက်စားရာနေရာတွင် Salvia chamaedryoides သည်အပူချိန်နှင့်နွေရာသီမိုးခေါင်မှုတို့နှင့်ထိတွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဥယျာဉ်များ၌တစ်လလျှင် ၁ လက်မခန့်တင်းကျပ်သောရေနည်းစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့်ဤအခြေအနေများကိုကြိုးစား။ ပုံတူပွားနိုင်သည်။ ရာသီအလိုက်မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်အပင်များကိုသဘာဝရေသွင်းလျှင်ဆောင်း ဦး ရာသီ / ဆောင်းရာသီတွင်ရေမသုံးပါနှင့်။
အကယ်၍ သင်၏စက်ရုံသည်ကာလရှည်ကြာမိုးခေါင်မှုကြောင့်ဖိစီးမှုကိုရှာဖွေနေပါကဖြည့်စွက်ရေလိုအပ်သည်။ နံနက်စောစော (သို့) ညနေခင်း၌စက်ရုံ၏အောက်ခြေရှိရေအိုးတစ်လုံးတွင် (သို့) ရေဖြင့်သုံးနိုင်သည် soaker ရေပိုက် တူညီသောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အတူမျိုးစုံအပင်ရေလောင်းလျှင်။ salvias အများစုလိုပဲဒီစက်ရုံဟာခြေထောက်ဟာအေးခဲပြီးမြေပေါ်မှာထိုင်နေတာကိုမကြိုက်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ပြmultipleနာပေါင်းများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအပင်နှင့်အပင်များသေဆုံးနိုင်သည်။
ကောင်းစွာညှစ်ထားသောမြေသည် Germander Sage ကြီးထွားရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ မြေဆီလွှာသည်အသင့်အတင့်မြေသြဇာကောင်းခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာရေနုတ်မြောင်းနေသောမြေဖြူတွေ၊ သဲများသို့မဟုတ် loam များဖြစ်သင့်ပြီး pH နှင့်အတူ ၆.၁ (အက်စစ်အနည်းငယ်) မှ ၇.၈ အထိ (alkaline အနည်းငယ်) ။ အိုး၌စိုက်ပျိုးသောအခါ, horticultural grit အများကြီးထည့်သွင်းပါ perlite ရေနုတ်မြောင်းနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ဆွေးရန်။
နွေ ဦး / နွေရာသီတွင်မျှတသောအရည်ဓာတ်မြေသြဇာကိုတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်အသုံးပြုပြီးဆောင်းတွင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုအသုံးမပြုပါနှင့်။ နှင်းခဲမှအမြစ်များကိုကာကွယ်ရန်ဆွေး၏ mulch ကိုနှောင်းပိုင်းတွင်အသုံးချနိုင်သည်။
Salvia chamaedryoides သည်အပြာပန်းပွင့်များနှင့်ငွေရောင်အစိမ်းရောင်သစ်ရွက်များရှိသည်။
Salvia chammedryoides ကိုအိုးတလုံးထဲမှာကြီးထွားလာတဲ့အခါအပင်များအမြစ်တွယ်လာနိုင်တယ်။ ဒီဖြစ်ပျက်အခါကအိုးအရွယ်အစားတက်သို့မဟုတ်စက်ရုံများသေးငယ်အပိုင်းပိုင်းခွဲဖြစ်စေတစ်ခုခုကိုအချိန်ပါပဲ။ ပန်းပွင့်ပြီးသည့်နောက်ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်သည်။
၃-၄ နှစ်အရွယ်ရင့်ကျက်သောဥယျာဉ်စိုက်ခင်းများသည်ကွဲပြားခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပန်းပွင့်ပြီးနောက်ကျဆုံးခြင်းအတွက်အပင်များကိုဝေယူပါ။ စက်ရုံပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဂရုတစိုက်တူး။ အမြစ်ဘောလုံးကိုမပျက်စီးစေဘဲအပင်ကိုမြေပြင်မှထုတ်ပစ်ပါ။ မည်သည့်နေရာတွင်မည်မျှခွဲခြားနိုင်သည်ကိုသိရှိရန်မြေဆီလွှာအချို့ကိုညင်ညင်သာသာသုတ်သင်ပါ။ အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်လုံလောက်သောအမြစ်များရှိစေရန်အပင်ကိုနှစ်ခြိုက်ပါ။ အပိုင်းတစ်ခုစီကိုအိုးများသို့မဟုတ်ဥယျာဉ်ရှိသူတို့၏နေအိမ်အသစ်များသို့စိုက်ပြီးရေထဲထည့်ပါ။
သင်သည်နွေ ဦး ရာသီသို့မဟုတ်နွေရာသီအစောပိုင်း၌သစ်မာခုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နွေ ဦး ရာသီနှောင်းပိုင်းနွေရာသီနှောင်းပိုင်းမှည့်သောအသီးများကိုလည်းယူနိုင်သည်။ အဓိကအားဖြင့် 5-8 လက်မအရှည်များကိုဖြတ်ပြီးအနိမ့်အရွက်၏ ၂-၃ လက်မများကိုဖယ်ရှားရန်သန့်ရှင်းသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိရိယာများကိုအသုံးပြုပါ။ ရေနုတ်မြောင်းများကိုအထောက်အကူပြုရန်ဆွေးနှင့် perlite အချိုး ၅၀:၅၀ အချိုးအစားဖြင့်အိုးငယ်လေးများကိုပြင်ဆင်ပါ။ အိုးအစွန်းတစ်လျှောက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအရွက်များအထိအညီအမျှအညီအမျှထည့်ပါ။ ဆွေးနှင့်ကောင်းမွန်သောထိတွေ့မှုကိုသေချာစေရန်။ လိုအပ်ပါက root ကိုဟော်မုန်းတွင်နှစ်မြှုပ်နိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ အမြစ်များထူထောင်ပြီး dappled အရိပ်ထဲတွင်စောင့်ရှောက်သည်အထိရှရေလောင်းခြင်းနှင့်စိုစွတ်သောစောင့်ရှောက်လော့။ အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်အတွက်တစ်ပိုင်းမှည့်သောအနည်ကျများကအောက်ခြေအပူမှအကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင်ခုတ်ဖြတ်ပြီးလျှင်ဥယျာဉ်ထဲသို့စိုက်ရန်အတွက်တစ်ထပ်လျှင်အမြစ်တွယ်ထားသောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုခွဲပါ။
အစေ့မှအပနောက်ဆုံးနှင်းခဲပြီးနောက်ပြင်ပမြေဆီလွှာထဲသို့တိုက်ရိုက်ကြဲပါသို့မဟုတ်နွေ ဦး ရာသီတွင်အိုး၌ကြဲပြီးနောက်မျိုးစေ့များကြဲရန်။ ပျိုးပင်ကောင်းတစ် ဦး အမြစ်စနစ်မတည်ထောင်မှီနေနှင့်များစွာသောနေနှင့်နေရာတစ်နေရာထားမှီတိုင်အောင်ဆွေးစိုစွတ်စေပါ။ အစေ့များကိုအပင်ပေါ်တွင်ကျန်ရှိသောအခြောက်လှန်းထားသောပန်းခေါင်းများမှကောက်ယူနိုင်သည်။ အေး။ ခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်နွေ ဦး အထိသိုလှောင်သိမ်းဆည်းပါ။ အပင်များသည်လည်းမှန်ကန်သောအခြေအနေတွင်မိမိကိုယ်ကိုမျိုးစေ့ကြဲနိုင်သည်။
Sage germander ကိုအလှဆင်ထားသောအပင်အဖြစ်ကြီးထွားလာသောကြောင့်အချက်အချာကျသောမြက်ပင်ဥယျာဉ်မှူးများကဲ့သို့ပုံမှန်ရိတ်သိမ်းခြင်းမှအကျိုးမရှိပါ။ ပန်းများကိုကြာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်အတွက်ပွင့်သောပန်းပွင့်များသည်မှန်မှန်ပွင့်ပြီးအရင့်ရောင်ပန်းပွင့်များကိုညှစ်ထုတ်ပေးသည်။ နှင်းခဲကင်းသောဒေသများတွင်နောက်ဆုံးပန်းပွင့်ပြီးနောက်တစ်ဝက်နီးပါးခန့်ကိုအပင်တစ်ပင်လုံးပြန်ခုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လာမည့်နွေ ဦး ရာသီတွင်အပြည့်အဝကြီးထွားမှုကိုတိုးပွားစေပြီးအပင်အားဆောင်းတွင်းသန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာကြည့်ရှုစေလိမ့်မည်။ အေးသောဒေသများရှိအပင်များတစ်ဝက် - အမြဲစိမ်းသို့မဟုတ်ရွက်ကြွေများဖြစ်နိုင်သည့်အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်းတွင်ကောင်းစွာသုတ်သင်နိုင်သည်။ အပင်အသစ်များသည်ခြေရင်းမှပေါ်လာပြီးနှင်းခဲအန္တရာယ်များကျရောက်သောအခါနွေ ဦး ရာသီတွင်ပြန်လုပ်ပါ။ အဖြစ်များသောအမြင်မှာကျန်ရှိသောတိုတောင်းသောအတိုများသည်နှင်းခဲများကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
'' မှန်ကန်သောစက်ရုံ, မှန်ကန်သောနေရာ '', ဒီစက်ရုံအမျိုးအစားကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မှဖော်ပြရန်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားလျှင်၎င်းစက်ရုံသည်ဥယျာဉ်တော်၌မှားယွင်းသောနေရာတွင်ရှိသည်ဟုနီးပါးအာမခံနိုင်သည်။ ပိုးမွှားနှင့်ရောဂါစာရင်းပင်လျှင်တိုသည်။
ဤအပင်များအတွက်ဘုံကြီးထွားလာပြproblemsနာများများသောအားဖြင့်ကြောင့်ဖြစ်သည် ရေ , အရိပ်အလွန်များ သို့မဟုတ် ရေမလုံလောက်ဘူး ။ ကောင်းမွန်စွာညှစ်ထားသောမြေသို့မဟုတ်အိုးထဲတွင်နေများကိုအပြည့်အ ၀ ရွေ့ပြောင်းပြီးအပင်လိုအပ်သည့်အခါရေလောင်းခြင်းဖြင့်လွယ်ကူစွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။
Aphids (Aphidoidea) သည်သစ်ပင်ကြီးထွားမှုအားသစ်ပင်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ phloem ရည်ကိုစားခြင်း၊ ရရှိလာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအရွက်များနှင့်အဓိကအားဖြင့်ပုံပျက်သည်။ Aphids သည်အခြားအပင်ရောဂါများကိုလည်းသယ်ဆောင်သည်။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာကုသရန် Ladybug လောင်းကဲ့သို့သောအကျိုးရှိသောအင်းဆက်ပိုးမွှားများကိုသုံးပါ။ သို့မဟုတ်ကောင်းသောအော်ဂဲနစ်ပိုးသတ်ဆေးဆပ်ပြာသို့မဟုတ် neem oil ဖြင့်ရေမှုန်ရေမွှား။
နှင့်အတူ ပင့်ကူသွင်း (Tetranychidae), အရွယ်ရောက်သူများသည်အနီ - အညိုရောင်များရှိပြီးအရွက်အောက်ဘက်ခြမ်းရှိကိုလိုနီနယ်မြေများတွင်နေထိုင်ပြီးပူပြင်းခြောက်သွေ့သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှင်သန်နိုင်သည်။ အပင်များပေါ်တွင်ပင့်ကူသွင်းခြင်း၏အထောက်အထားများကိုအပင်များနှင့်အပင်များအကြားလျင်မြန်စွာကျဆင်းခြင်းလက္ခဏာများပြသသည့်အချည်အနှောင်တစ်ခုအဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ aphids များကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်အရွက်များကိုအဝါရောင်ဖြစ်စေ။ ထွက်သွားသည့်အပင်ဖျော်ရည်များကိုစားသုံးကြသည်။ ပင့်ကူသွင်းပစ္စည်းများသည်စျေးကွက်အတွင်းထုတ်ကုန်များစွာကိုခုခံနိုင်သည့်အတွက်ပိုးသတ်ဆေးများမဖြန်းရန်ရှောင်ပါ။ ဓာတုပစ္စည်းများအနေဖြင့် lacewings နှင့် ladybugs ကဲ့သို့သောသဘာဝသားကောင်တွေကိုသတ်ပစ်နိုင်သည်။ ဥယျာဉ်၏မထိရောက်သောဒေသများသို့ပြန့်ပွားမှုကိုကာကွယ်ရန်အဆိုးဝါးဆုံးသောထိခိုက်ပျက်စီးသောအပင်များနှင့်အပင်တစ်ခုလုံးကိုလိုအပ်ပါကဖယ်ရှားပစ်ပါ။
ပတ်ကျိ နှင့် ခရု အေးသောရာသီဥတုသည်ငယ်ရွယ်သောအညွန့်များကိုလုံး ၀ စားသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်စိုစွတ်သောနေရာများတွင်ရှင်သန်နိုင်သဖြင့်အပင်များပတ်လည်ရှိareasရိယာများကိုအပျက်အစီးများကင်းစင်စေပြီးတစ်နေ့တာတွင်အမိုးအကာဖြစ်စေနိုင်သည်။ မြေဆီလွှာအပူချိန်နှင့်အခြေအနေများမှန်ကန်သောအခါ nematodes များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ လက်နှိပ်ဓာတ်မီးကို သုံး၍ ညအချိန်တွင်ပတ်ကျိနှင့်ခရုများကိုရှာဖွေပြီးဖယ်ရှားပါ။ ကောင်းမွန်သောအော်ဂဲနစ်ခရုနှင့်ပက်ကျိငါးစာများသည်အသုံးဝင်ပါသည်။
အမှုန့်များအနာ ဥယျာဉ်တော်၌, အထူးသဖြင့်ပူပြင်းစိုစွတ်သောရာသီဥတုအခြေအနေစဉ်အတွင်းအပင်များသက်ရောက်သည်။ ဤဖန်းဂတ်စ်ရောဂါသည်အပင်ဖြူကြီးထွားမှုနှင့်အတူအပင်များဖုံးလွှမ်း။ အပင်ဖြူများထွက်လာပြီးဖုန်မှုန့်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့်အလင်းကိုဓာတ်ပြုခြင်းကိုတားဆီးသည်။ အရွက်သည်အဝါရောင်ပြောင်း။ ခန်းခြောက်သွားပြီးသေသည်။ ကောင်းမွန်သောဥယျာဉ်သန့်ရှင်းရေးဤရောဂါကိုရှောင်ရှားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ရောဂါကူးစက်ခံရသည့်သစ်ရွက်များကိုဖယ်ရှားပြီးအပင်များကိုနေအပြည့်အဝပြောင်းရွှေ့ပါ။ ရောဂါမဖြစ်မီသို့မဟုတ်မြင်တွေ့ရသောအခါ sulfur, neem oil သို့မဟုတ် potassium bikarbonate စသည့် fungicidal spray ကိုသုံးပါ။
salvia chamaedryoides တစ် patch ကို။
A: ဂျာမန်းပညာရှင်နှင့်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းသည်ပန်းဥယျာဉ်တစ်လျှောက်ပန်းပွင့်ရာသီတစ်လျှောက်ပျားများ၊ လိပ်ပြာများနှင့်ငှက်မင်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
မေး။ ။ Salvia chamaedryoides နဲ့ဘယ်အပင်တွေကကောင်းသလဲ။
ဖြေ။ အစုလိုက်အပြုံလိုက်စိုက်ပြီးစိုက်လိုက်တာနဲ့ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှာအပြာရောင်ပန်းတွေပွင့်နေတယ်။ ထို့အပြင်ဤပညာရှိသည်မီးခိုးများ၊ အစိမ်းရောင်အရွက်များကဲ့သို့သောမီးခိုးရောင် / စိမ်းလန်းသောအရွက်များနှင့်အခြားမိုးခေါင်မှုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ပန်းပွင့်နှစ်ရှည်သီးနှံများဖြစ်သည့် Achillea နှင့်သဲကန္တာရများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။
ငါအိုငျးရစျပေါ့, နေထိုင်သည်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်, ဘဲလ်ဖတ်၌အလုပ်လုပ်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်မှာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေပြောင်းခဲ့ပြီးပြည်သူ့ရေးရာဌာနကိုစွန့်ခွာပြီး၊ လူတွေနဲ့အပင်တွေနဲ့အပြင်မှာအလုပ်လုပ်ရတာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်အသိုင်းအဝိုင်းမှာအလွတ်တန်းလုပ်ရမယ်၊
ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပုံစံတစ်မျိုးတည်းဖြင့်ပြုစုပျိုးထောင်ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကြီးထွားလာခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်၏စွဲလမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးခွဲဝေချထားခြင်းခံရသောအခါအမှန်တကယ်စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ငါအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစိုက်ပျိုးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်၊ သို့သော်ပန်းပွင့်များကိုဖြတ်ခြင်းသည်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဓိကဖြစ်သည်။ သင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းပန်းစည်းကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးခံစားချက်ဖြစ်သည်။
ပင့်ကူ mite ဘယ်လိုကြည့်သလဲ